Hariiroo hawaasa musiliimaa fi mootummaa, maaltu jijjiirame? - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, PM Office
Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee dhaabbilee amantaa gidduutti dhibdeen uumamu rakkoolee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii keessatti uumamuuf sababa ta'u.
Waldhibdeen amantiiwwan Islaamaa fi Kiristaana keesssatti mudatu ammoo yeroo hedduu sababa mootummaan gidduu seenuufi jedhu dureewwan amantaa.
Gama kanaan wal-qoollifannaan Mana Maree Walii Galaa Dhimmoota Islaamummaa ykn Majilisa gidduu ture akka fakkeenyaatti ni ka'a.
Majliisa imaanaan itti kennamerratti namoonni maal jedhu?
'Mootummaan hawaasa Musliimaa deggera'
Jijjiiramni gama siyaasaatiin Itoophiyaa keesatti dhufe erga eegalee as garuu bulchiinsa mootummaa haaraan wantoota karaarraa daban akkasii sirreessuuf carraaqqii taasisaa tureera.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy dhibdeen majilisa gidduutti uumame akka furamuuf qaamolee dhimmi ilaallatu mariisisuun koreen dhimma kanarratti hojjetu akka hundaa'u godhan.
Haala kanaan majilisi duraan ture kan hawaasni muslimaa komii irraa qabu diigamuun caaseffama haaraadhaan hundaa'eera.
Yeroo ammaa Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa ce'umsaa hundaa'uun wantoonni babbadan sirrachaa jiraachuu dureewwan amantaa Islaamaa ni dubbatu.
Faxirii Galma Barkumee
Dhibdee Majilisa gidduutti mudatee, hawaasa muslimaa wolqoollifachiise furuuf jecha Koreen jijjiiramaa, kan Koree fala barbaadduu, majilisa duraanii fi ulamaawwan ykn beektota amantaa Islaamaa irraa hundaa'ee hojjechaa ture.
Kana keessatti qindeessummaadhaan kan hirmaachaa turan Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad, keessattuu ji'a ramadaanaa kana keessa hawaasa muslimaa waliin akkaataa kanaan dura hin baratamneen hariiroo uumaniiru.
Guyyaa kaleessaas sagantaa faxirii guddicha akka biyyaatti Galma Barkumeetti qophaa'erratti argamuun ergaa dabarsaniiru. Maaltu jijjiirame?
Waa'ee sagantichaa irratti yaada kan nuuf laatan Majilisa ce'umsaa keessatti gorsuudhaan kan hojjechaa jiran Ustaaz Kaamil Shamsuu ''Kun seenaa biyyattii keessatti isa jalqabaati'' jedhan.
Sagantaa faxirii sanarratti namoonni 9,000-10,000 ta'an argamaniiru kan jedhan Ustaaz Kaamil, ulamoonni, qondaaltonni mootummaa olaanoon, abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni kan irratti hirmaatan ture jedhan.
''Uumata muslimaa waggaa dheeraaf ramadaana keessa boo'aa ture kan imimmaan irraa haqe ture sagantichi" jedhu.
"Amantiin muslimaa mootummaa wayyaanee fi namoota ilmii ykn beekumsa hin qabneen hoogganamuun hafee yeroo itti ulamotaan hogganamuu eegaletti sagantaa galateeffannaa qophaa'eedha."
"Jijjiirama majilisa keessatti dhufeef jalqaba rabbiin galateeffannee, achirraan ammoo namoota qooda fudhataniif galata galchine'' jedhan.
Gaaffiin majilisa irratti ka'aa ture hedduu fi yeroo dheeraa kan fudhateedha kan jedhan Ustaaz Kaamil, isa keessaa inni ijoon caasaan majilisaa kan duraa diigamee haaraan akka hundaa'u gochuu ture jedhu.
''Majilisi harka mootummaatii ba'ee harka hawaasa muslimaa haa galu gaaffiin jedhu dhimma ijoo ture. Amma mootummaan harka keessaa fudhatee majilisi bilisa ba'eera. Qaamni kun beektota amantaa Islaamaatiin akka hoogganamu gochuun hojii dansaa tokko.''
Dhimma diinagdeerratti gaaffiin hawaasni muslimaa kaasaa ture, keessaahuu waa'een Baankii dhala irraa bilisaa amma furamuuf abdii qaba jedhu Ustaaz Kaamil.
''Gaaffiin dhala irra bilisa ta'e nuuf haa dhaabbatu kan jedhu gaaffii yeroo dheeraa ture. Ministirri muummee waltajjii kaleessa galgala geggeeffamerratti hawaasaaf waadaa seenanii jiru."
"Majilis labsiidhaan hundeeffamee seera qabeessaan beekamtii argatee akka jiraatus mootummaan waadaa seeneera'' jedhan.
Dhimmoota ijoo hawaasi muslimaa gaafachaa ture keessaa iddoon salaata iidii seera qabeessaan istaadiyoomiitti akka raawwatamuu fi uummanni muslimaa shororkeessaadha utuu hin jedhamin akka fedhetti socho'ee diinii isaa geggeffachuun isaan amma fooyya'aa jiraniidha jedhan Ustaaz Kaamil.
Dhimmi hajjii xiyyeeffannaa argateera
Dhimmi hajjii wantoota hawaasa muslimaa komii kaasisaa turan keessaa isa ijoodha kan jedha Ustaaz Kaamil, kunis rakkoo walxaxaa fi hojimaata badaa majilisa duraanii keessa turerraa madda jedhan.
''Koreen jijjiiramaa haaraan gara hojiitti wayita seenu rakkoo sakatta'ee baase keessa inni ijoon dhimma hajjiin walqabbatuudha" jedhu.
"Rakkoon daandi xiyyaaraa Itoophiyaa waliin jiru maali, kan makkaa jiru maali jennee adda baasneerra. Koree kana keessaa namoota lama gara Sa'uud Arabiyaatti erginee isaanis haala mijeessaa jiru. Gama daandii Itoophiyaatiin dhimmoota walxaaxoo jiranis mariidhaan karaa qabsiisaa jirra.''
Kaffaltiin namoonni hajjiif deeman kaffalanii fi tajaajilli isaan argatan akka walsimu, maallaqi isaanii akka hattootaan hin saamamneef, dhimmuma kanarrati koreen addaa dhaabbatee hojjechaa jira jedhan Ustaaz Kaamil.
Deenmaark uffata fuula haguugu dhorkite
Namoota dhimma hajjii irratti komii kaasaa turan keessaa kan ta'an Haji Abuubakar Alamuu garuu boordiin Majilisa ce'umsaa dhimma kana nan sirreessa kan jedhu, bara kana milkaa'uunsaa shakkii qaba'' jedhu.
''Hajjiidhaaf ji'a lama qofatu hafa. Namoonni hajjii deeman wantoota raawwachuu qaban dursanii xumuraniiru. Wantoonni sirrachuu qaban ammoo tokko lama miti. Hedduu walxaxoodha."
Haa ta'u malee fuulduraaf abdiin jira, kanaaf ammoo sirna faxirii kaleessa Galma Barkumeetti geggeeffame agarsiiftuudha jedhu.
Walabummaan amantaa muslimaa abdii qaba kan jedhan Haji Abuubakar jijjiirramni mana maree dhimmoota islaamummaa keessatti sadarkaa federaalaatti eegalame gadi bu'uu akka qabu akeeku.
Garuu federaala irraa hanga godaatti rakkoon wal-fakkaataan mudataa waan tureef federaala qofarratti xiyyeeffachuun rakkoo ture hundeerraa hin furu jedhan Haji Abuubakar.
"Amma nutu mootummaa affeera, giddu seentummaan mootummaa hin jiru"
Koree dhimma majilisaa ilaalee sirreessu hundeessuurraa eegalee qophiwwan hawaasni muslimaa qopheeffatan irratti qondaaltonni mootummaa ni hirmaatu.
Keessattuu Ministirri Muumee Abiy Ahmad dureewwan amantaa kanneen gaaffii hawaasa muslimaaf fala barbaadaa turan waliin mul'achuun heddummaateera.
Kun gaaffii hawaasni muslimaa mootummaan amantaa keessa harka galfatee nu jeeqeera jechuun kaasaa turan ammas irra deebiin hin kaasisuu jennee Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafanneerra.
''Mootummaan qophii nuti qopheeffannerratti affeerraa keenyaan argama. Uummanni muslimaa ammoo uummata biyyattii keessaa tokko waan ta'eef mootummaa tasuma baqachuu qaba yaada jedhu hin qabu'' jedhan.
Magaalaa Kombolchaatti namoonni miidhaman
"Kanaan dura mootummaan dureewwan amantii Islaamaa kan fedhe muudee kan fedhe shaara. Amantii keenya ajandaa siyaasaaf itti fayyadama. Amma garuu nutu waltajjii keenyarratti hirmaadhaa jennee nama barbaannu afeera."
Waltajjii Galma Barkumee kaleessaarrattis kanumatu ta'e jedhu Ustaaz Kaamil.
Dhimma rakkoo waldhibdee hawaasa muslimaa gidduu turee irratti namoota yaada kennan keessaa kan taate Muniiraa Abdulmannaan ''mootummaan waan kanaan dura harka isaatiin balleesse harka isaatiin sirreessuu qaba" jetti.
"Kanaafuu Ministirri Muummee Abiy Ahmad xaxaawwan mootummaan isaanii majilisa keessatti uume sirreessanii hawaasa muslimaaf haala mijeessuuf waan ifaajaa jiran natti fakkaata jetti'' yaada jedhus qabdi.
Ministirri Muummee kan dhimmamanii hawaasa muslimaaf haala mijeessaa jiraniif waan harka mootummaatti bade karaatti deebisuuf malee, harka nu qabanii ofii dhimma keenyarratti murteessuuf miti jedhu Ustaaz Kaamilis.
''Egaan biyya tokko keessa waan jirruuf ammoo dhimmi biyyaas nu ilaallata. Iddoon mootummaan nu barbaachisutti bifa seerri hayyamuun mootummaa waliin hojjechuun yoomiyyuu waan hin hafne.''
'Mootummaan majiliisa ykn koree fala barbaadduu miti hawwaasa Musiliimaa deggera'
Deenmaark hijaaba kan fuula doksu dhorkite
Ji'a Ramadaanaa: Tamiriin maaliif Ramadaana keessa filatamaa ta'e?
8 Caamsaa 2019
Magaalaa Kombolchaatti waldhabdee uumameen namoonni miidhaman
KALLATTIIN Gindhiiritti mana hidhaatti namoonni 66 koronaavaayirasiin qabaman
Mariin Hidha Haaromsaa adda cite torbee dhufu itti fufa jette Itoophiyaan
Ilmi mootii Saawudii Kaanaadaa keessatti nama ajjeesuuf karoorfachuun himataman